Olee otú ịzụta backlinks na-enweghị ihe ize ndụ nke Google ga-eme?
A ma ama engines ọchụchọ ndị dị ka Google ka ha na-enyocha ikike ọ bụla nke website ma ọ bụ blog na ọnọdụ ogo dị iche iche na-echebara ha azụ. Njikọ njikọ dị mma maka usoro a. Ma ọ bụrụ na ị kpebiri inwe mmụba ngwa ngwa n'ọkwá, ị kwesịrị ịmara otú ịzụta backlinks ma zere ịta ahụhụ Google n'otu oge ahụ.
E nwekwara ụfọdụ backlinks nke a ghaghị izere n'ọnọdụ ọ bụla, karịsịa ndị na-abịa site na netwọk ọha na eze. Ma ọ bụghị ya, Google ga-ahụ ha ma wedata ọkwa gị - panthenol κρεμα. Ya mere, otu esi zụta backlinks na-enweghị njide? Ekwadoro m ime ihe kacha mma ị ga-eme iji zere doro anya ma ọ dịkarịa ala site na ụdị atọ backlinks. Ha abughi nani na ha adighi nma ugbu a, kama ha abughi uzo kwesiri iru ugwo. N'okpuru ebe a, ihe a ga-ezere na-efu.
Na-eme ihe gbasara akwụkwọ ndekọ akwụkwọ na spammy ọdịnaya. Ekwuru m na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog gị ekwesịghị inwe ihe odide ederede ọ bụla. Ma ọ bụghị ya, ihe ị na-eme n'Ịntanet ga-enwe ọdịdị na-adịghị mma site n'echiche nke engines ọchụchọ. Ya mere, zere ihe ndekọ ọ bụla nke spammy nke na-ebipụta isiokwu dị ala na-enye Dolinks backlinks na nloghachi.
E kwesịkwara izere ịzụta nnukwu mgbanwe azụlinklinks. N'ezie, akụkụ nke njikọ ndị a nwere ike ịrụ ọrụ dị mma maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. Ka o sina dị, ihe ọ bụla ga-emecha kwụsị site n'inweta ụgwọ ọrụ ị ga-akwụ. Ihe bụ na ọ bụrụ na gị backlink profaịlụ na-ekara elu tumadi na-agafere links, spammy blọọgụ, akpaghị aka outreach ozi ịntanetị, ma ọ bụ ọ bụla na ụdị mkpa mmegwara njikọ - na ị na-azụ a red ọkọlọtọ maka Google na-abịa mgbe ị na.
Ejiri iji nlekọta pụrụ iche jikọọ njikọ dị elu na PR dị elu. Mgbe ị na-emeso DoFollow njikọ (ma na-ere ma ọ bụ ịzụ ha), jide n'aka na a gaghị n'akara. M na-ekwu na akwadoro nkwado ndabere na mpaghara gị niile na-atụ aro ka e jiri akara "chakollow" akara. Ma ọ bụghị ya, ụgbọelu ọchụchọ ahụ ga-ahụ ha dị ka atụmatụ aghụghọ nke na-emetụta ntaramahụhụ iwu.
Olee otú ịzụta backlinks? Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị chee ya ihu - mmachi azụ backlinks adịghị abịa maka ọnụ ala. Ego ole ka ha ga-eri? Ọfọn, nke ahụ na-adabere. Ka anyị hụ ụfọdụ ihe atụ ndị ọzọ ị ga - enweta ma ọ dịkarịa ala nhụta ọhụụ dị na ebe na otu esi zụta ndenyeghachi azụ na enweghị ihe ize ndụ iji nweta ụgwọ ọrụ nke Google:
ga-aghọ ngwọta zuru oke ịzụta ịzụta backlinks. Ihe niile dị nnọọ mfe - ị kwesiri ịdebere gị blog ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ, yana ịkwụ ụgwọ ọtụtụ ebubo maka otu nyochaa.
Ndị mmadụ na-ekwu na PR1 na PR2 nwere ike ịzụta ịzụta backlinks maka gburugburu 25-30 dollar na 100 dollar ma ọ bụ karịa. N'ezie, ndị backlinks a kwesịrị ịdị mma ma yie ka ndị na-eme ihe ndị dị ndụ. Ịzụta ha, Otú ọ dị, jide n'aka na onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ anaghị ere azụlinks n'ihu ọha, dịka ọ ga-adị mfe maka Google ịchọpụta ha.
Ngalaba weebụsaịtị kachasị elu nwere ike ịghọ ngwọta dị mma ịzụta backlinks maka ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa. N'ụzọ dị otú a, jide n'aka na ị na-ekwu okwu maka isi iyi - egbula oge ịlele ọnụọgụ abụọ, ebe ọtụtụ ebe na-egwu ma na-egwuri egwu.
N'ime nhọrọ ndị kasị dịrị nchebe, ịnwere ike ịzụta azụ azụ site n'aka ndị na-ede blọgụ ibe gị na niche gị. Ee, ha na-arịọ maka ego maka ego. E kwuwerị, nke a bụ maka azụmahịa, ọ bụghị ya?